Chiratidzo chakatangazve basa pane server kodhi uye yayo yakadzamidzirwa cryptocurrency | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Signal Technology Foundation, iyo inovandudza yakachengeteka yekutaurirana system Signal akazivisa munguva pfupi yapfuura iyo yatangazve basa kuburitswa yekodhi yezvikamu kubva kumutumwa server.
Mushure mekuburitswa kweshanduko kunzvimbo yeruzhinji kwakamiswa pasina tsananguro muna Kubvumbi 22 yegore rapfuura (2020) uye kugadziridzwa kwenzvimbo kwakamiswa mushure mekuziviswa kwechinangwa chekubatanidza iyo yekubhadhara system muChiratidzo.
Zvino (gore mushure meizvozvo) Iyo bvunzo yesystem yekubhadhara yakasanganiswa muChiratidzo yakatanga, zvichibva paiyo cryptocurrency MobileCoin (MOB) pachayo, yakagadziriswa naMoxie Marlinspike, munyori weiyo Signal protocol uye kutenderedza nguva imwe chete, iyo repository yakaburitsa shanduko kumaseva zvikamu izvo zvakaunganidzwa mukati megore, kusanganisira kuitwa kweyekubhadhara system. .
Kune avo vasingazive nezve cryptocurrency MobileCoin, ivo vanofanirwa kuziva kuti iyo yakagadzirirwa kuvaka nhare yekubhadhara nhare iyo inovimbisa kuvanzika kwemushandisi.
Dhata yemushandisi inongoramba iri mumawoko ako chete, uye ivo vanogadzira Signal o Zvivakwa zvemaneja mamaneja haakwanise kuwana mari, mushandisi chiyero data, uye nhoroondo yekutengesa. Iyo yekubhadhara network haina kana imwechete poindi yekudzora uye yakavakirwa pane iyo pfungwa yekahwande muridzi, musimboti weiyo ndeyekuti mari dzese dziri mumumbure dzinoumbwa segadziriro yemunhu oga zvikamu zvinogona kuregererwa. Huwandu hwese hwemari pamambure hwakaiswa pamamirioni mazana maviri nemakumi mairi eMOB.
MobileCoin yakavakirwa pa blockchain, iyo inochengeta nhoroondo yezvese zvinobudirira kubhadhara. Kuti usimbise muridzi wemari, unofanirwa kunge uine makiyi maviri: kiyi yekuendesa mari uye kiyi yekutarisa chinzvimbo. Kune vazhinji vashandisi, makiyi aya anogona kutorwa kubva kune yakajairika base kiyi.
Shanduko dzinoumbwa pakombuta kana nhare yemushandisi, mushure maizvozvo dzinoendeswa kune imwe yenzvimbo munzvimbo yeanoshanda kuti igadziriswe mune yakasarudzika enclave.
Dhata dzinogona kungoendeswa kune crypto node avo vakasimbisa kushandiswa kweiyo isina kuvandudzwa MobileCoin kodhi mune iyo enclave. Chikamu chega chega chakazvimiririra chinodzokorora muchina wehurumende unowedzera mashandisiro echokwadi kune blockchain uchishandisa iyo MobileCoin Consensus Protocol kusimbisa kubhadhara.
Kuchengetedza kuvimbika kweiyo data uye kudzivirirwa kubva kuhuori hunodzokororwa, Merkle Muti chimiro chinoshandiswa, mune iro rimwe nerimwe bazi rinotarisa ese ari pasi pematavi uye node kuburikidza set (muti) hash. Nekuve neiyo yekupedzisira hashi, mushandisi anogona kuongorora iko kurongeka kwese nhoroondo yekushanda, pamwe nekururamisa kwenzvimbo dzakapfuura dhatabhesi.
Musiki weSignal akatsanangura pfungwa yekubatanidza mari yemadhora mumutumwa nechishuwo chekupa vashandisi nzira yekushandisa iri nyore inochengetedza zvakavanzika, zvakafanana nekuti mutumwa weSignal anovimbisa sei kuchengetedzeka kwekutaurirana. Bruce Schneier, mukurumbira wekuchema uye wekuchengetedza makomputa nyanzvi, akatsoropodza zviito zvevanogadzira Signal. Schneier anotenda kuti kuisa mazai ako ese mubhasikiti imwe haisiyo mhinduro yakanakisa, uye poindi yacho haisi iyo zvachose izvo izvi zvinotungamira mukubhuroka uye kuomarara kwechirongwa, uye kwete kunyangwe kubvunza kushandiswa kwe blockchain, uye kwete muTry to chinongedzo Chiratidzo kune cryptocurrency.
Dambudziko rakakosha, sekureva kwaSchneier, nderekuti kuwedzera system yekubhadhara kumagumo-kusvika-kumagumo kunyorera kunyorera kunowedzera kutyisidzira kwakabatana nekuwedzera kufarira kubva kune akasiyana masosi enjere nevatongi vehurumende. Kutaurirana kwakachengeteka uye kutengeserana kwakachengeteka kwaigona kunge kwakaitwa muzvikamu zvakasiyana.
Zvishandiso zvine yakavimbika kumagumo-kusvika-kumagumo kunyorera kunyorera iko kutove kurwiswa uye zvine njodzi kuwedzera dhigirii rekushora: kana mashandiro acho asanganiswa, kukanganisa kwehurongwa hwekubhadhara kunokwevera iko kwekupedzisira-kumagumo kunyorera kushanda nawo Kana chimwe chikamu chikafa, sisitimu yese inofa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chiratidzo chakatangazve basa pane server kodhi uye yayo yakadzamidzirwa cryptocurrency